Itoophiyaa, Eertiraa: Dubbii pireezidant Isaayyaas marsaalee hawaassa irratti falmii kaase - BBC News Afaan Oromoo
Pireezidantichi gaaffii fi deebii Guraandhala 7 miidiyaalee biyyaalessaa biyyattii lama Eri-TV fi Raadiyoo 'Dimtsi Hafash' jedhamu waliin taasisaniin dhimmaa Itoophiyaa irratti yeroo dheeraa fudhatanii yaada bal'aa kaasan.
Gaaffiif deebiin kun Afaan Ingiliziitti hiikamee marsariitii ministeera Odeeffannoo biyyattii irratti Guraandhala 21 kan maxxanfame yoo ta'u marsaalee hawaasaa irratti xiyyeeffannaa kan argate garuu erga Ministirri Odeeffannoo biyyattii Yamaane Gabramasqal fuula 'twitter' isaanii irratti maxxansanii booda ture.
Pireezidantichi dubbii isaanii kanaan jijjiirama erga MM Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru dinqisiifatanii, rakkoolee duraan turaniif ammoo 'TPLF' cimsanii qeeqaniiru.
Kan marsaalee hawaasaa keessumaa 'twitter' irratti falmii kaase garuu waa'ee siyaasaa sabummaa bu'ureeffate irratti yaada kennan Obbo Yamaaneen maxxansani.
"Tarsiimoon siyaasaa sabummaa irratti bu'uureffate summaawaa fi kan yeroon irra darbe, bu'aa tokkollee hin qabne ta'uu jabeessinee amanna" jedhan.
"Dhukkuba kana dhabamsiisuun Itoophiyaaf faayidaa qabeessa. Irra darbees Eertiraa fi biyyoota naannoo keenyaa ni fayyada," jedhan.
"Lafti Eertiraa kan hin deebi'iin hafe diddaa TPLF dhaan''
Humnoonni siyaasaa sirna federaalizimii sab-daneessaa amma Itoophiyaan hordoftu kanarratti araarama hin qabne jiru jechuun kan katabde gaazexeessituufi gulaaltuu olaantuun barruu 'Addisstandard' Tsadaale Lammaa, pireezidantichi hariiroon nagaa biyyoota lamaanii akka itti fufu kan fedhu yoo ta'e ajandaa qaamolee muraasaa qofa hafarsuu hin qabu jette.
Itti dabaluunis "sirni federaalizimii Itophiyaa yoo kufe, akka pireezidant Isaayyaasiif ta'utti osoo hin taane akka nuuf ta'utti kan sirreeffatu nuyi lammilee Itoophiyaati" jette.
Dubartiin mana lammii Eertiraa waggoota 20'f eeggaa turan gatii kiraa waliin haadha manaaf kennuufi
Jawaar Mohaammad dabalatee lammileen Itoophiyaa kaani fi dhimma Itoophiyaa irratti barreessuun kan beekaman pirofeesar Kijeetil Tiroonvool kun 'dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuudha' jedhani.
Wayita Itoophiyaan ce'uumsa siyaasaa daddaaqamaa keessa jirtutti yaada akka kanaa kennuun biyyattii nagaa dhabsiisuuf akka yaadametti fudhatama jedhan pirofeesar Tiroonvool.
"Pireezidant Isaayyaas Eertiraan federeeshinii jalatti akka bultu didee, ofii walabummaa erga filatee booda, Oromiyaa fi naannoleen kaan federaalizimiin of danda'anii akka hin bulle waakkachuun waan wal faallessu" jedhe xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammad.
Gazexeessaa fi qorataa lammii Eertiraa kan ta'e Eeliyaas Amaaree yaadni pireezidant Isaayyaas akka hin malletti hiikkaan itti kenname jechuun falma.
Akka namni kun jedhutti wanti preezidantichi qeequu fedhan sirna federaalizimii Itoophiyaa osoo hin taane, 'siyaasa sabummaa bu'uura godhate' kan TPLF biyyattii qoqqooduuf itti dhimma bahaa turtedha.
Ministirri haajaa alaa Itoophiyaa duraanii Siyyuum Masfin, "Isaayyaas uummata Eertiraa harka walakkaa bittimsee ka'ee, biyyatti otoo bulchuu hin dandeenye, Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti nageenyaafi misoomaa fiduu hin danda'u" jedhaniiru.
'Dhimmaa Itoophiyaa keessaa harka galfachuu hin dhiisu yoo ta'e harka isaa murra' jechuunis dhaadatanii turan.
Dhimmi dubbii pireezidant Isaayyaas kun ammallee ijoo dubbii ta'ee lammilee Itoophiyaa fi Eertiraa marsaalee hawaasaa irratti falmisiisaa jira.
Isaayyaas Afawarqii: Eertiraan tajaajila buufataalee doonii Asabiifi Matsawwaa fooyyeessuufi
11 Guraandhala 2020
Dubartii mana lammii Eertiraa imaanaan waggaa 20'f eegan kirreessaa waliin haadha manaaf kennuufi
Haleellaa TPLF baqattoota Ertiraa irraan gahu balaalefamu qaba jedhame
Manni nyaataa Waayit Haawus cinatti argamu dhukaasaan raafame
Ajajaa humna addaa Beenishaangul duraanii dabalatee sadi 'qaamolee hin beekamneen' ajjeefaman
Osoo jiranii 'bakka hin jirretti' himatamuun maaliif?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 9 Caamsaa 2019
Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaa fiixee xumuramuu gahe
Hoggantoota TPLF, waraanaafi poolisii 96 irratti ajajni hidhaa bahe
Yeroo dhuma kan haaromfame: 13 Sadaasa 2020